न्यूज सञ्जाल: » मेस्सीलाई कारबाही ! तीन महिना प्रतिबन्ध
मेस्सीलाई कारबाही ! तीन महिना प्रतिबन्ध
न्यूज सञ्जाल १८ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:३०
एजेन्सी- कोपा अमेरिका २०१९ दौरान प्रतियोगिताबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेका कारण अर्जेन्टिनाका कप्तान लिओनेल मेस्सीलाई तीन महिना प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । उनलाई राष्ट्रिय टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा प्रतिबन्ध लागेको हो ।
र्जेन्टिनाले सन् २०२२ को विश्वकपका लागि छनोट प्रतियोगिता मार्च २०२० देखि मात्र सुरु गर्ने हुनाले भने मेस्सीलाई केहि राहत मिलेको छ । दक्षिण अमेरिकी फुटबल महासंघले मेस्सीलाई ६ महिना प्रतिबन्ध लगाउने हल्ला चलेपनि अर्जेन्टिनी फुटबल संघसँग छलफलपछि ३ महिनामा सजाय घटाएको बुझिएको छ ।